iClock PRO, famantaranandro azo namboarina ho an'ny biraonao | Avy amin'ny mac aho
iClock PRO, famantaranandro azo namboarina ho an'ny biraonao
Raha mandany ora maro eo alohan'ny Mac isika, azo inoana fa mila mahafantatra amin'ny fotoana rehetra isika hoe inona ny ora sy ny andro amin'ny herinandro raha jerena indray mipi-maso. Na dia marina aza fa amin'ny alàlan'ny bara fisakafoanana ambony dia afaka mahazo izany vaovao izany isika, ao amin'ny Mac App Store dia afaka mahita rindranasa samihafa izay mampiseho amintsika famantaranandro azo ovaina amin'ny birao.
Anisan'ireo rindranasa rehetra hita ao amin'ny Mac App Store mba hampisehoana ny ora, miresaka momba ny iClock PRO izahay, fampiharana iray izay ahafahantsika mahita haingana ny fotoana, ny andro amin'ny herinandro, ny loharanon-karena misy, ny fampiasana CPU ... iClock PRO manolotra modely fiambenana isan-karazany, modely azontsika ampanjifaina amin'ny habeny sy amin'ny loko ary ny endrika ary koa ny toerana misy azy eo amin'ny efijery.
Saingy ny iClock PRO dia tsy mampiseho antsika ny ora fotsiny, fa mamela antsika koa hanampy faritra hafa, mety tsara rehefa tsy maintsy mifandray amin'ny firenen-kafa isika. Izy io koa dia mamela antsika hametraka fanairana matetika azo ovaina, mba tsy hiankina amin'ny smartphone na smartwatch antsika. Io dia ahafahantsika manamboatra azy io ihany koa mba hampandrenesany antsika matetika isaky ny miala sasatra.
Endri-javatra lehibe IClock PRO
Ataovy miavaka ny singa tsirairay amin'ny famantaranandro.
Misy kinova analog, nomerika ary nofinofy.
Tanana marobe azo isafidianana, ao anatin'izany ny tanana mihetsika.
Ataovy miavaka ny ambadiky ny sehatry ny loko, gradients, sary manokana.
Ny fampandrenesana fanairana dia mety ho feo na hafatra am-peo.
Volan'ny alarobia mandroso.
Isan'ny fanairana tsy voafetra.
Ny famantaranandro izao dia mampiseho antsika na ny fiposahan'ny masoandro na ny filentehan'ny masoandro.
Izy io dia manana kajy fandavana fotoana.
Azontsika atao ny manafina ny kisary dock ka ny fampiharana dia tsy misy afa-tsy amin'ny bara ambony.
Ary safidy maro hafa ho an'ny fanamboarana.
iClock dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny Mac App Store 2,99 euro, fa mandritra ny ora vitsivitsy azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity, raha mbola misy ny tolotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » iClock PRO, famantaranandro azo namboarina ho an'ny biraonao
Apple Business Manager, vavahady tranokala vaovao ho an'ny fitantanana orinasa no hita
Ny fampiharana Apple TV dia misy any Mexico izao